देउवा र नेपालसँग प्रचण्डकाे छुट्टाछुट्टै भेट - नेपालबहस
देउवा र नेपालसँग प्रचण्डकाे छुट्टाछुट्टै भेट
| १३:४५:४० मा प्रकाशित
२४ जेठ, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गरेका छन् ।
सोमबार दिउँसो सवा ११ बजे माधवकुमार नेपाललाई उनकै कोटेश्वरमा भेटेलगत्तै प्रचण्ड देउवालाई भेट्न बुढानीलकण्ठ पुगेका उनी निकट स्रोतले जनाएको छ । उनले नेता नेपालसँग करिब १० मिनेट र देउवासँग करिब २० मिनेट कुराकानी गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
नेताहरुबीच के विषयमा कुराकानी भयो भन्ने खुलेको छैन । तर समसामयिक राजनीति र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन संसद विघटनको मुद्दाबारे छलफल गरेको स्रोतको दावी छ ।
कांग्रेस, माओवादीलगायत ५ विपक्षी गठबन्धनले देउवालाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सारेका थिए। प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध राजनीतिक र कानुनी लडाइँ लड्ने बताएका गठबन्धनले प्रतिनिधि सभा विघटनबारे सर्वोच्चको फैसला कुरिरहेका छन्।
निलम्बित एमाले सांसदहरु प्रदेशसभाको बैठकमा भाग लिने ! ५ मिनेट पहिले
कांग्रेस नेता खतिवडाले गरे अक्सिजन सिलिण्डर सहयोग १८ मिनेट पहिले
आजबाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु, साउनदेखि पढाई हुने ३० मिनेट पहिले
चितवनमा वार्षिक ४० हजार युनिट रगत खपत २२ घण्टा पहिले
मलङ्गवाको प्रशासनिक भवन निर्माण गुणस्तरहीन ४ दिन पहिले
रिक्त राष्ट्रियसभा सदस्य उप-निर्वाचनको नतिजा आजै आउने ४ हप्ता पहिले
ग्लोबल आइएमई बैंकमा रोजगारीको अवसर, बुधबारसम्म आवेदन दिन सकिने १ हप्ता पहिले
भारतमा कोरोनाबाट मर्नेको संख्या तीन लाख नाघ्यो, थामिएन मृत्यु ३ हप्ता पहिले
भारतपछि जापान र श्रीलंका पनि भ्रमण नगर्न अमेरिकाद्धारा आफ्ना नागरिकलाई सुझाव ३ हप्ता पहिले
कोरोना कहरमा पोखरालाई पर्यटनकै पिर ४ हप्ता पहिले
सूर्यविनायक नगरपालिका–७ हात्तीगौँडामा कभर्डहल निर्माण हुने १ वर्ष पहिले
गायिका टिका सानुको “चोखो माया ” [ भिडियोसहित ] २ वर्ष पहिले
डा.केसीका माग सम्बोधन गर्न माग गर्दै शिक्षण अस्पतालमा कांग्रेसको धर्ना ८ महिना पहिले
देउवा भन्छन्, सुदृढ र सबल लोकतन्त्रबाट मात्रै नेपाल सुन्दर, शान्त र समुन्नत राष्ट्रमा परिणत हुनेछ ! ५ महिना पहिले